induction brazing theory | Umakhi womshini wokushisa wokungeniswa izixazululo zokushisa zokungeniswa
isingeniso sokubamba inkolelo
I-Technology Brazing Technology
I-Induction Brazing Principle | Inkolelo
Izinto zokwenza izinto ze-brazing
Izinsimbi zensimbi ze-Brazing zingatholakala ngezindlela ezihlukahlukene, ubujamo, ubukhulu kanye nama-aloyi kuye ngokuthi kusetshenziswe kanjani. I-Ribbon, izindandatho ezenziwe ngaphambilini, unamathisele, ucingo kanye nama-washhers aguqulelwe ngaphambili nje nje ambalwa amafomu namafomu ama-alloys angatholakala.
I-Induction Heating Theory
Izindlela zokungenisa izinto zinikeza indlela elula futhi eqondile yokushisa ngokushesha futhi ngempumelelo indawo ekhethiwe yomhlangano. Ukucatshangelwa kufanele kunikelwe ekukhethweni kwamandla okusebenza okuhlinzeka ngamandla, ubukhulu bamandla (i-kilowatt isetshenziswe ngamasentimitha ayisithupha), isikhathi sokushisa, nokuklanywa kwe-coil yokufakelwa ukuhlinzeka ukujula okudingekayo kokushisa kuhlangene othize.
Ukushisa kwe-Induction ukushisa okungaxhumani ngendlela ye-transformer theory. Ukunikezwa kwamandla ngumthombo we-AC ku-coil yokufakelwa okuba yi-winding eyinhloko ye-transformer ngenkathi ingxenye yokushisa iyona yesibili yomshini we-transformer. Isiqephu somsebenzi sishisa ngama-base materials 'okuyizinto zokugcina ugesi kagesi kuya kulokhu okwenziwe khona okugeleza emhlanganweni.
Ukudlula okwamanje ngomqhubi kagesi (umshini wokusebenza) kubangela ukushisa njengoba umanje uhlangana nokumelana nokugeleza kwawo. Lezi zilahleko ziphansi kwamanje ezigeleza nge-aluminium, ithusi kanye nama-alloys abo. Lezi zinto ezingezona ezensimbi zidinga amandla engeziwe okushisa kunabo abakwa-carbon steel counterpart.
I-current alternating iqala ukugeleza phezulu. Ubuhlobo obuphakathi kwemvamisa yamanje okwehlukile kanye nokujula okungena kulo mkhakha kuyaziwa ngokuthi ukujula kokubhekisisa kokushisa. Ingxenye yecala, uhlobo lwezinto ezibonakalayo kanye nobukhulu bodonga bungaba nethonya ekushiseni ukushisa ngokusekelwe ekujuleni kokubhekisela.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukukhishwa kwesibalo, isimiso sokubhakanyiswa kwe-induction, isingeniso sokubamba inkolelo, induction soldering, isimiso sokungeniswa kwe-induction, i-induction soldering theory